Kusvuta uye Fodya Kurega Rubatsiro kuVermont's LGBTQ Nharaunda
Vermonters NDINODA KUREGA LGBTQ
YEMAHARA UYE YOKUTSIGIRA BATA RUBATSIRO RWEBGBTQ
Wakasimba zvekusiya fodya. Iyo LGBTQ nharaunda inoputa pachiyero chakakwirira kupfuura yakatwasuka / cisgender vanhu, asi LGBTQ vanhu vanokunda matambudziko mazuva ese. Iwe unogona kukunda kupindwa muropa nefodya, zvakare. Tine zviwanikwa, maturusi uye zvirongwa zvakagadzirwa kuti zvikubatsire kurega kuputa uye zvimwe zvigadzirwa zvefodya.
Tsvaga LGBTQ-inoshamwaridzika mutano wehutano kuburikidza ne Vermont Diversity Hutano Chirongwa . Nhengo maitiro anozvipira kuve akachengeteka, kusimbisa, kutsigira uye inoshanda nzvimbo kune avo vari munharaunda yeGBBTQ.
Tora rubatsiro kurega kubva ku802Quits. Dzidza zvakawanda nezve yakagadzirirwa kurega rubatsiro, kusanganisira MAHARA nicotine zvigamba, chingamu uye lozenges.
Gadzirira kugadzirira nematanho akapusa, sekugadzirira imba yako, kubasa uye mota. Dzidza kugadzirira.
Shanyira National LGBTQ Fodya Yakabatana neCancer Network .
Taura nemupi wako wezvehutano nezve mishonga uye rega rubatsiro rwakakunakira iwe.
Kana iwe uchida kutanga:
kufona 1-800-QUIT-IZVO yemahara yakagadzirirwa yakasiya rubatsiro neako-on-one coaching;
Kurega online uchishandisa maturusi uye zviwanikwa senge mamabhodhi emashoko, rega kuronga uye rega kufambira mberi kwekutevera.